စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်: January 2012
ဝရံတာ အစွန်းပိုင်း အမှောင်ရိပ်ကျနေတဲ့ နေရာနားမှာ တကိုယ်လုံးကို ကပ်ထားမိတယ်.. အနည်းဆုံးတော့ အဲ့ဒီ အမှောင်ရိပ်အောက်မှာ နေခွင့်ရနေတာကို ကျေးဇူးတင်ရမလို.. ပူပန်ချင် ယောင်ဆောင် ရတာတွေလဲ နောက်ဆုံးတော့ ထူးမခြားနား ဇာတ်ပဲ ဆက်ကနေတာ မဟုတ်လား..
‘ဖုန်းလဲ ဆက်လို့မရဘူး.. ဧရိယာပြင်ပပဲ ရောက်နေတယ် ပြောတယ်.. ဒီကောင်ဟာ ဒီအချိန်အထိတောင် ဘယ်သဝေထိုးနေတယ် မသိဘူး.. ငါတော့ သေချင်တော့တာပဲ.. သူ့အဖေနဲ့ ကလဲ တရန်ပါပဲ..’
တတွတ်တွတ် ရွတ်နေတဲ့ ယောက္ခမ အမကြီးရဲ့ အသံကို ဝရံတာဘောင်ပေါ်ကနေ လမ်းထိပ်ကို မျှော်ကြည့်နေရင်း တချက် နားစွင့်လိုက်တယ်.. လမ်းအချိုးကွေ့လေးကို ကျော်မှ သူမတို့ တိုက်ခန်းဆီ ရောက်လာမှာ ဆိုတော့ မီးရောင်လဲ့လဲ့မြင်ရင် ကိုကိုများ ပြန်လာပြီလား လို့ မသိမသာ မျှော်နေမိတာ ပါပဲ..
အရင်တုန်းကတော့ အေးတိအေးစက် နိုင်တယ်လို့ ကိုကို စွပ်စွဲခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းမတယောက်ဟာ အခုတော့ အေးခဲနေတာမဟုတ်ဘဲ ခံစားချက်တွေ သေဆုံးနေတာလို့ ပြောရင် ကိုကိုက ဟားတိုက်များ ရီမလား..
‘မင်းဟာ လူမှ မဟုတ်ဘဲကွ.. စက်ရုပ်ပဲ.. ငါ့ကို လက်ထပ်လိုက်ရလို့ မင်း ဝမ်းနည်းနေတာ မဟုတ်လား နုနုထွေးရဲ့..မင်းကို ဘယ်တော့မှ ငါ ကွာရှင်းမပေးဘူး.. ငါစိတ်ဆင်းရဲရသလို မင်းလဲ စိတ်ဆင်းရဲစေရမယ်.. အဲ့တာ ငါ့ကျိန်စာ .. မင်း တသက် မှတ်ထား’
ပါးပြင်ပေါ် စီးကျလာတဲ့ မျက်ရည်တွေကို အလန့်တကြား လက်ဖဝါးနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်သုတ်လိုက်တယ်.. ဒီနေရာက တဖဝါးမှ မခွာချင်ဘူး.. ကိုကိုလာရင် တံခါးဖွင့်ပေးဖို့ ကြိုးစားရမယ်.. ဝတ္တရား ရှိတဲ့အတိုင်း ထမင်းစားပြီးပြီလား.. ဒါမှမဟုတ် ရေချိုးမလား မေးရမယ်.. ဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်း အိပ်ရာဝင်ရမယ်.. ဒါ သူမ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ဘဝ..
နောင်တ မရခဲ့ဘူးလား လို့ တပါးသူ မေးမှာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးရမှာကို သေရမှာထက် ကြောက်မိတယ်.. ရွေးချယ်မှုတိုင်းမှာ ၂ ခု ဒါမှမဟုတ် ဒီ့ထက်ပို များများစားစား ရှိနိုင်မလား.. သူမအတွက် ရွေးချယ်ခဲ့တာဆိုတာ ခေါင်းညိတ်ခဲ့တာ တခုပင်.. ရွေးချယ်စရာဟာ ဒါမဟုတ်ရင် ဒါပါပဲ.. ရွေးချယ်ခွင့် ရခဲ့တယ်လို့ လူရီချင်စရာ ဟာသလုပ် ပြောခွင့်ရချင်ခဲ့တာ..
အရင်တုန်းက နုနုထွေး ဆိုတာဟာ တခြားကမ္ဘာက ဂြိုလ်သားအသွင်.. ပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီ..
‘အမေ အိပ်ချင် အိပ်လေ.. သမီး ဆက်စောင့်လိုက်ပါမယ်..’
ယောက္ခမ အမကြီးက စိပ်ပုတီးကို လက်မှာ ပတ်လိုက်ပြီး ဆက်တီခုံလက်ရန်းကို အားပြု ထရပ်လိုက်တယ်..
‘အေး အမေ ခဏလှဲလိုက်ဦးမယ်.. ပြန်လာရင်လဲ စကား များမနေနဲ့တော့.. အဖေကြီး အကြောင်းလဲ နည်းနည်းပါးပါး သတိပေးလိုက်ဦး၊ မနက်ကျရင်တော့ ပူညံပူညံ အသံတွေ ကြားရပါဦးမယ်’
အဖေက သူမကို သနားလို့ မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ ကိုကိုနဲ့ ဆူညံပူညံဖြစ်တာဟာ ထုံးစံလို ဖြစ်နေပြီ.. ဒီနေ့ ၁၀ နာရီဟာ နောက်ကျတယ် ဆိုရင်.. မနက်မိုးလင်း ဆူညံသံကြားရပြီးတာနဲ့ ကိုကို့ အိမ်ပြန်ချိန်ဟာ ၁၁ နာရီဖြစ်ခဲ့ပြီ.. ဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေဟာ နောက်ကျသထက် ကျလာခဲ့တယ်..
‘ဟုတ်တယ်.. အဲ့ဒီ မိန်းခလေးဟာ မင်းထက်တော့ ငါ့ကို ပိုပြီး အသက်ဝင်စေတယ်.. ငါရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အသိကို သူက အသိအမှတ်ပြုတယ်.. အေးတိအေးစက် မဆက်ဆံဘူး.. မင်း နားလည်လား.. မင့်ထက်’
‘တော်ပါတော့ ကိုကို.. တော်ပါတော့.. ဒီလောက် နှိပ်စက်ရ တော်ပါတော့..’
‘ဘာကွ မင်းကို ကွာရှင်းပေးရမယ် ဟုတ်လား၊ ကွာရှင်းဖို့အတွက် မင်းကို လက်ထပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး..
မနက်ခင်းက ရန်ပွဲမှာ သွေးတစက်စက်ကျနေတဲ့ ကိုကို့လက်ဖဝါးကို အောက်ငုံ့ထားတဲ့ မျက်ဝန်းတွေက တဆင့် ကြည့်နေမိတယ်.. ကိုကို့ရဲ့ လက်အနာက မြင်သာတယ် ဆိုရင်တောင် နုနုထွေးရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက နှလုံးသားက သွေးတစိမ့်စိမ့် ယိုကျနေတာကို မမြင်သာတော့တာ အမှန်ပါ…
ဝရံတာဘောင်ကို တကိုယ်လုံး အားပြုပြီး မှီရပ်လိုက်တယ်.. ဆက်လက် အားပြုဖို့အတွက် အားအင်တွေ ပေးပါဦး.. ဒီလိုမျိုးပဲ မှောင်မိုက်တဲ့ ညတစ်ညမှာ လွဲချော်ခဲ့တဲ့ ကံကြမ္မာက သူမကို ဒီ့ထက် မှောင်တဲ့ အမှောင်တွေဆီကို တွန်းပို့ခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား..
မျက်ရည် စို ငိုခဲ့ရဖူးတဲ့ ချစ်ဦးသူကို အခုအချိန်အထိ မမေ့သေးဘူးလို့ .. အဲ့ဒီလို အထင်တွေကို ဘယ်တော့များမှ ချေဖျက်ခွင့်ရပါတော့မလဲ…. ထားလိုက်ပါတော့လေ.. ဒါ သူမရဲ့ကံကြမ္မာပါပဲ..
မီးရောင်စူးရှရှ မြင်တော့ နှလုံးသားက လှိုက်ခနဲ ထခုန်သွားတယ်.. တက္ကစီကားက သူမတို့တိုက်ခန်းရှေ့ကို ထိုးရပ်လိုက်ပေမဲ့ ဆင်းလာတဲ့သူကတော့ ကိုကို မဟုတ်ခဲ့..
နာရီလက်တံ တချက်ချက်က သူမကို အချက်ပေးနေသလိုပင်.. ဒီနေရာမှာ ရပ်နေတာ အချိန်ဘယ်လောက်ရှိနေခဲ့ပြီမှန်း သူမ မသိတော့.. ဘာကိုမှ မသိချင်တော့.. ညောင်းချိနေတဲ့ ခြေထောက်တွေနဲ့ ပင်ပန်းနေပြီဖြစ်တဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ အကြားမှာ ဘယ်အရာဟာ ပိုအလေးသာသလဲ.. အခုအချိန်မှာ မချိန်စက်ချင်တော့..
အိမ်ပြန်နောက်ကျနေတဲ့ လင်သားတစ်ဦးကို စောင့်ရတာဟာ သူများတွေ အသိမှာ သနားကရုဏာ သက်စရာနော်.. အလည်ကျူးနေတဲ့ အိမ်ကို ပြန်မလာချင်တော့တဲ့ လင်သားကို ပေတေပြီး စောင့်ရတဲ့ သူမ အဖြစ်ကို မဲ့ပြုံးတချက် ပြုံးမိလိုက်တယ်..
‘မင်းက သနားစရာ သူတော်ကောင်းမလေးပါ နုနုထွေးရဲ့. .အခု ငါဆိုးပြနေတာတွေဟာ မင်းကိုတော့ ဂုဏ်တက်စေပါတယ်ကွာ.. ဟားဟား.. အခုဆို ငါ့အဖေက အစ ငါ့ကိုဆို ဆိုးသွမ်းနေတဲ့ လူဆိုးတယောက်လို့ ထင်နေတာမဟုတ်လား.. မင်းကလဲ ဒီလိုပဲ လိုချင်နေတာ မဟုတ်လား’
ဒါဆို ဘာဖြစ်လို့များ နုထွေးကို လက်ထပ်ချင်ခဲ့ရတာလဲလို့ ဟိုးအရင် အစဦးပိုင်း အချိန်တွေတုန်းကတော့ ရန်ဖြစ်တိုင်း မေးခဲ့တာပင်..
သိပ်ချစ်တယ် ဆိုတဲ့သူဟာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို အနည်းလေးတော့ စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ် မဟုတ်လား ကိုကို.. အချိန်တိုင်း မယုံသင်္ကာအကြည့်နဲ့ စွပ်စွဲပြောဆိုချင်တဲ့သူရဲ့ စကားလုံးတွေကြားမှာ သူမ ဘယ်လောက်အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိနေမလဲ ဆိုတာကို ကိုကို တွေးကြည့်မိဖူး ပါရဲ့လား..
ချစ်တယ် လို့ ခဏ ခဏ ပြောဖူးတဲ့ ကိုကိုဟာ ကိုယ့်ကို ချစ်ရဲ့လားလို့ ဘာလို့များ မမေးခဲ့တာလဲ.. ကိုယ့်ကို ချစ်ပါလို့ ဘာလို့များ မတောင်းဆိုခဲ့ဖူးတာလဲ .. အခုအချိန်မှာ စဉ်းစားစရာ မလိုတော့ဘူး.. သူမ မဟုတ်တဲ့ မိန်းခလေးတယောက်ရဲ့ အပြုအစုမှာ ကိုကို သာယာနေခဲ့ပြီ.. အမေနဲ့ အဖေရဲ့ မေတ္တာ စေတနာတွေကို နားလည်ပေမဲ့ ကိုကို့ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကိုတော့ အသိမပေးချင်ခဲ့..
စောင့်ထိန်းရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေကို အတိအကျ လိုက်နာခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ သည်းခံနိုင်မှုတွေကြားထဲမှာ ကိုကို့ကို ဘယ်အချိန်အထိ သည်းခံရမလဲ.. သည်းမခံနိုင်တော့တဲ့ အခါတွေမှာ ဘယ်အရာကိုများ ထွက်ပေါက်ယူရမလဲ.. ဟင့်အင်း မသိချင်ပါဘူး.. ပြန်စရာ အိမ်မရှိတော့တဲ့ သူမ အတွက်တော့ အရာရာဟာ မှောင်အတိကျနေခဲ့တာပင်..
မှောင်မိုက်တဲ့ ညအလယ်မှာ အခုတော့ သူမ တယောက်တည်းပင်.. အယင်တုန်းကလဲ သူမ တယောက်တည်းပါပဲ.. အခုတော့လဲ တယောက်တည်းပါပဲ..နောင် ဘယ်အချိန်ထိများ တယောက်တည်း ရှိနေမလဲ ..
အမှောင်ဟာ သိပ်နက်နဲလွန်းလာတဲ့အခါ ပြောင်လက်ပြီး လှပလာတယ်လို့ ထင်လာမိတယ်.. ညအမှောင်ဟာ အထီးကျန်တဲ့စိတ်ကို ပိုပြီး အားကောင်းစေလာခဲ့တယ်.. အမှောင်ရဲ့ ဓာတ်ကို သဘောကျနေတဲ့ သူမ အတွက်တော့ ဘယ်အရာက ပိုမှောင်လာစေသလဲ မစဉ်းစားချင်ခဲ့တော့..
အိပ်မက်တွေထဲမှာ အိပ်မက်ပဲ ရှိခဲ့တဲ့ သူမအတွက်တော့ အမှောင်တွေထဲမှာလဲ အမှောင်ပဲ ရှိမှာပါ.. အလင်းတစ တွေ့ဖို့ စိတ်ကူးယဉ်နေတယ်ဆိုတာကို တဖြည်းဖြည်း သိလာခဲ့ပြီ…
လမ်းချိုးကွေ့ရဲ့ မီးတိုင်လင်းရောင်အောက်မှာ အနက်ရောင် စိတ်ကူးတစ လွင့်မျောလာနေခဲ့ပြီ.. သံဘာဂျာတံခါးကို အသာအယာ ထိတွေ့လိုက်တော့ အေးစက်နေတဲ့ အတွေ့က အထိတ်တလန့် ဖြစ်စေမိတယ်.. အသံမမြည်အောင် သတိထားနေရင်းကြားက သော့ခလောက်နဲ့ သံတိုင် ရိုက်ခတ်သံက နားစည်ကို ဆူညံသွားစေခဲ့တယ်..
လွတ်မြောက်ထွက်ခဲ့ပြီ.. နောက်ဆုံးတော့ သူမ မုန်းတဲ့ အမှောင်ထုထဲမှာကိုပဲ သူမဟာ အမှောင်တစကို ဖမ်းဆုပ်ချင်မိတဲ့သူ တယောက် ဖြစ်ခဲ့ပြီ.. အမှောင်ထုထဲ တိုးဝင်လာလေ.. အမှောင်ဟာ ပိုမှောင်လာလေပါပဲ..
တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ညမှာ ညှပ်ဖိနပ်သံပါးပါးက နောက်ကျောက လိုက်လာတဲ့ တစ္ဆေတကောင်လို သူမရဲ့နောက်ကျောကနေ ကပ်ပြီးလိုက်လာတယ်.. ကတ္တရာပါးပါး ခင်းထားတဲ့ လမ်းပေါ် ကျောက်စရစ်ခဲချည်း သပ်သပ်သာ ရှိနေတဲ့ လမ်းတလျှောက်မှာ ဘဝဟာ နောက်ကျောမလုံခဲ့ဘူးဆိုတာကို ပိုသိသာလာစေတယ်..
အားကိုးစရာ ခြေဖဝါးနဲ့ အိပ်မက်တွေကိုသာ ဆုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြားမှာ သူမဟာ ဘာမှ မဟုတ်တော့.... သူမရဲ့ မိန်းမသားဘဝ.. သူမရဲ့ ကံကြမ္နာ၊ သူမရဲ့ အနာဂတ်၊ သူမရဲ့ ဖြစ်တည်မှု .. အားလုံး အားလုံးဟာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီ..
ဒီလမ်းချိုးအကွေ့လေးကို လွန်ရင် ဘဝဟာ လွတ်မြောက်ထွက်ခဲ့ပြီလို့ သူမ ထင်နေခဲ့ပြီ..
ပါးပြင်ပေါ် စီးကျလာနေတဲ့ နှလုံးသားရဲ့ငိုကြွေးသံတွေကို ဘာကမှ မတားဆီးနိုင်တော့.. စူးစူးရှရှ ကားမီးလင်းတန်းအောက်မှာ သူမက တကိုယ်လုံး ပစ်ဝင်ခဲ့လိုက်ပြီ… နံဘေးကို ပြေးဝင်လာတဲ့ မော်တော်ကားရဲ့ အရှိန်နှုန်းကို သူမ ဝမ်းသာအားရ ကြိုဆိုမိလိုက်တဲ့ အခိုက်မှာပဲ ဘရိတ်အုပ်သံ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ကြားရပြီး ကတ္တရာလမ်းမနဲ့ ကားဘီးပွတ်တိုက်သံက သူမ နားထဲ အရှိန်ပြင်းစွာ ဝင်ရောက်ခဲ့တော့တာ..
တံခါးဖွင့်သံ ကျယ်ကျယ်ကို ကြားရပြီး ပြေးဝင်လာတဲ့ ဖိနပ်သံတွေကြားမှာ သူမ အကြားချင်ဆုံး အသံကို ကြားလိုက်ရတယ်..
တင်းထားတဲ့ စိတ်တွေ အကုန်လျှော့ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အမှောင်ထဲမှာ ပျော်တဲ့ မိန်းခလေးဟာ အမှောင်ထဲကိုသာ တိုးဝင်သွားတော့တာပါပဲ..
12:36 pm, 23-1-2012
at 9:28 AM Labels: ဝတ္ထုတို
လင်းလက်တဲ့ ကြယ်စင် ၆ လုံးနဲ့ တောင်ဆိတ်တကောင်ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီကို မသိခင်ကတော့ ကိုယ်ဟာ မြင်မြင်ရာ ချိုနဲ့ဝှေ့ချင်တဲ့ ဒေါသသင့်နေတဲ့ မိန်းမငယ်တယောက်သာ ဖြစ်နေခဲ့တယ်.. ဘာကြောင့်များ ကိုယ့်ရဲ့ စေတနာ တွေဟာ မြင်သာတဲ့ အရာတွေ အဖြစ် ပြောင်းလဲမသွားတာလဲ.. လူတွေအပေါ် နာကျည်းချင်တတ်တဲ့ စိတ်က နှလုံးသားမှာ မကြာခဏ အမြစ်တွယ်ခဲ့ဖူးတယ်..
ဒါပေမဲ့ ခဏတာပါပဲ.. အတေးအမှတ် ကြီးတတ်တဲ့ မိန်းခလေးဟာ တခါတလေတော့လဲ အရာရာကို သင်ပုန်းချေပစ်လိုက်တာပါပဲ.. ကလဲ့စားချေဖို့အထိ ဥာဏ်ရည်မမှီတတ်တော့ အနုနည်းနဲ့သာ ဆန့်ကျင် သင်ပုန်းချေ ကန့်လန့်ကာ ပိတ်ခဲ့စေတော့တယ်..
ပင်လယ်နတ်ဖုရား ပိုဆိုက်ဒွန်ဟာ တောင်ဆိတ်တကောင် အသွင်ပြောင်းလိုက်ပြီး လှပတဲ့ လူမိန်းမသား သီအိုဖာနီကိုပါ တောင်ဆိတ်မ အသွင် ပြောင်း တူနှစ်ဖြာ မေတ္တာမျှ ချစ်ခင်စုံဖက်လို့ အလွန်တန်ခိုးကြီးပြီး ရွှေရောင်အတိပြီးတဲ့ အမွှေးအမျှင်နဲ့ အတောင်ပံ ပါပြီး လေမှာ ပျံဝဲနိုင်တဲ့ နတ်တောင်ဆိတ်ကြီး တကောင်ကို ဖွားမြင်တယ် တဲ့.. ဒါဟာ ပုံပြင်ရဲ့ အစပါပဲ..
ဒဏ္ဍာရီလာ နတ်ဖုရားတွေရဲ့ သမိုင်းမှာ ရွှေရောင်တောင်ဆိတ် တကောင် မွေးဖွားလာပုံ ပုံပြင်တပုဒ်..
ကိုယ့်ကတော့ ရက်ထပ်တဲ့ သင်္ကြန်ရက်ရဲ့ ပထမဆုံး အကြိုနေ့ တရက်မှာ ဖွားမြင်ခဲ့တယ်.. ရွှေရောင်တောက်ပ မနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ငယ်ဘဝဟာ သူလိုကိုယ်လိုပါပဲ.. အဲ့ဒီမှာတင် ရွှေရောင်တောင်ဆိတ်တကောင်နဲ့ နက္ခတ်သာ တူတဲ့ မိန်းခလေး တယောက် မွေးဖွား လာခဲ့တာပါ.. ကိုယ်ဟာ ဒဏ္ဍာရီထဲကလိုလဲ ရွှေရောင် မတောက်ပဘူး.. သာမာန် မိန်းမငယ်တဦးပါ..
ရွှေရောင်တောင်ဆိတ်ဟာ လူ့ကမ္ဘာမှာ နေထိုင်ပြီး ဒုက္ခရောက်သူတွေကို ကူညီသတဲ့.. ကိုယ်တို့မှာ တူညီတာ ဒါပဲ ရှိတယ်.. ဒါနဲ့တင် ကိုယ်ဟာ ရွှေရောင်တောင်ဆိတ်လို လူတွေကို ကူညီချင်တတ်တဲ့ နတ်ဆိုး တကောင် ဖြစ်လာတော့တာပဲ.. ကိုယ်က လူတွေကို ကူညီချင်တယ်.. လူတွေက ကိုယ့်အကူအညီကို လိုအပ်တုန်းသာ အသုံးချချင်ပြီး ကိုယ့်နာမည်ကိုတော့ မေ့ထားချင်ကြတယ်.. ကိုယ်က အဲ့ဒီအတွက် မနာကျင်ခဲ့ပေမဲ့ သူတို့ကတော့ လိပ်ပြာမလုံခဲ့ဘူး.. အဲ့ဒီမှာတင် ပြဿနာတချို့ စတင်ခဲ့တော့တာ..
လူတွေဟာ ကိုယ်တိုင်က လိပ်ပြာမလုံတဲ့ အခါ .. လုံလောက်တဲ့ ဆင်ခြေတရားတွေကို အရူးအမူး ရှာဖွေတတ်တော့တာပါပဲ.. အဲ့ဒီမှာတင် ကမ္ဘာမီးလောင် သားတောင် ချနင်း သတဲ့.. ကိုယ်က အပြစ် မတင်ခဲ့ပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကိုတော့ အနည်းဆုံး လိပ်ပြာ လုံလုံနဲ့ ဝင့်ဝင့်ကြွားကြွား ဖြစ်စေချင်ခဲ့တယ်.. ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပဲ မှားခဲ့တယ်.. ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းခဲ့တဲ့သူတွေ အပေါ် ကိုယ်က သူတော်ကောင်း လုပ်ချင်ခဲ့မှုတဲ့.. အဆုံးမှာတော့ ရေပေါ်မှာ အရုပ်ရေးသလို ကိုယ့်စေတနာတွေဟာ ရေတပွက်တောင် မပွက်ခဲ့.. အလဟဿဖြစ်ခဲ့ပြီ..
အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့ လူ့ပြည်မှာ အဲ့သားမတ် ဆိုတဲ့ ဘုရင်က မိဖုရား နက်ပလီနဲ့ ပေါင်းဖက်ပြီး သားတော် ဖလစ်ဆပ်နဲ့ သမီးတော် ဟယ်လီကို မွေးဖွားသတဲ့.. ဒါပေမဲ့ အဲ့သားမတ်ဟာ လောဘကြီးတယ်.. အီဒို ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကိုပါ မိဖုရားမြှောက်လိုက်တဲ့အခါ မိဖုရား နက်ပလီဟာ အချစ်ရေးမှာ အရေးနိမ့်သွားတော့တယ်..
အီဒို မိဖုရားက ချစ်ခြင်းကို အပြည့်အဝ ရတာတောင်မှ လောဘကြီးလွန်းတဲ့ အတွက် သူမရဲ့ နောင်မွေးလာမယ့် သားကလေး ထီးနန်း မရမှာစိုးလို့ မိဖုရား နက်ပလီရဲ့ သားတော်နဲ့ သမီးတော်ကို ယဇ်ပုလ္လင်မှာ ပူဇော်ဖို့ လင်သားကို သွေးဆောင်တော့တာပါပဲ..
ကိုယ်တော်ရဲ့ သားနဲ့သမီးကို ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင် ယဇ်ပူဇော်ဖို့ မိုက်မိုက်မဲမဲ စဉ်းစားနေတဲ့ ဘုရင် အဲ့သားမတ်ကို တောင်းပန် တိုးရှိုးလို့ မရတော့တဲ့ မွေးမိခင်ဖြစ်တဲ့ နက်ပလီက ရွှေရောင် တောင်ဆိတ်ကြီးကို အကူအညီ တောင်းရတော့တာပေါ့..
ကြင်နာတတ်ပြီး လူသားတွေကို ကူညီချင်တတ်တဲ့ ရွှေရောင် တောင်ဆိတ်က မောင်နှမ နှစ်ယောက်ကို ကျောပေါ် တင်ပြီး ပင်လယ် ကို ဖြတ်ပျံ ခဲ့ပေမဲ့ သမီးကလေး ဟယ်လီက ပင်လယ်ထဲကို ပြုတ်ကျရှာသတဲ့.. သားတော်လေး ဖလစ်ဆပ်ကိုတော့ Aries နတ်ဖုရားကို အပ်ခဲ့တယ်..
ရွှေရောင်တောင်ဆိတ်ကြီးဟာ သေအံ့ဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ကို သူ့ရဲ့ အသက်နဲ့ လဲထပ်ပြီး ထာဝရ ရှင်သန်တဲ့ နတ်ဖုရားတွေ အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်..
ဟယ်လီကလေးက ပင်လယ်နတ်သမီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီး သားတော် ဖလစ်ဆပ်ကိုတော့ အေရီးစ် နတ်ဖုရားရဲ့ သမီးနဲ့ လက်ဆက်စေခဲ့တယ်.. ရွှေရောင်တောင်ဆိတ်ကြီးဟာ သူ့ရဲ့ ရွှေရောင်တောက်ပတဲ့ အရေခွံကိုသာ နတ်ကွန်းရှေ့မှာ ချိတ်ဆွဲပေးပါ ဆိုတဲ့ တောင်းဆိုမှုကိုသာ ပြုခဲ့ရှာသတဲ့..
ရွှေရောင်တောင်ဆိတ်ကြီးရဲ့ ကြင်နာတတ်တဲ့ အသည်းနှလုံးကို ချီးမြှင့်မြှောက်စားတဲ့ အနေနဲ့ ဇုနတ်မင်းကြီးက ကောင်းကင်ပေါ်မှာ တောက်ပ ကြည်စင်တဲ့ ကြယ်စင် ၆ လုံးနဲ့ ရွှေရောင်တောင်ဆိတ်ပုံကို မှတ်တမ်းထိုးစေခဲ့တယ်..
မြင့်မြတ်တဲ့ နှလုံးသားကို အရင်းခံပြီး အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်ပြီး အသက်ကို စတေး ပေးဆပ် ရဲဝံတဲ့ သဘာဝကို အမှတ်ရစေဖို့အတွက် ကြယ်စင်တွေရဲ့ အလင်းတန်းနဲ့ ထိတွေ့သူဟာ လူသားတွေကို အကျိုးပြုတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့သူတွေ အဖြစ် မွေးဖွားစေခဲ့သတဲ့..
ဒီနက္ခတ်တွေနဲ့ ယှဉ်မွေးခဲ့တဲ့ မိန်းခလေးဟာ လူသားအကျိုးပြု မြင့်မြတ်တဲ့ သူတဦး ဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့လား.. အခုအချိန်မှာတော့ ကြယ်စင်ရဲ့ အလင်းကို ထိတွေ့မှာစိုးလို့ ကန့်လန့်ကာနောက်ကနေ ကောင်းကင်ကို တိတ်တခိုး မျှော်ကိုးကြည့်တတ်တဲ့ မိန်းခလေးမှာ အထီးကျန်စိတ်နဲ့ အတူ ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားတစုံ မပျောက်ဆုံးနိုင်သေးတာဟာလဲ ဘုရားပေးတဲ့ လက်ဆောင်တခုပါပဲ..
တစုံတရာကို မမျှော်ကိုးပေမဲ့ ရရှိလာတဲ့ ရလဒ်တွေကြားမှာ မလူးသာ မလွန့်သာ နာကျင်စရာတွေချည်းသာ အမြဲ ကြုံရတော့တာ.. ပေးဆပ်ခြင်းဟာ ရယူခြင်းအတွက် ပထမ အစ ခြေလှမ်းဆို ဘယ်အရာကို ပေးဆပ်လိုက်လို့ ဘယ်အရာကိုများ တောင်းဆိုခဲ့ရဖူးသလဲ.. ကိုယ် မစဉ်းစားတတ်ခဲ့.. ကိုယ်ပေးတဲ့ အကူအညီဟာ ထောင်တန်သလား၊ သောင်းတန် သလား၊ ကျိန်းသေတာကတော့ တန်ဖိုးမသိသူတွေကြားမှာ ပေါ့တန်စေခဲ့တယ် ဆိုတာပါပဲ..
ဘဝ လမ်းကြောင်းတလျှောက်မှာ တပါးသူတွေရဲ့ ပြဿနာ အခင်းအကျင်းတွေကြားထဲ မျောပါ တတ်ခဲ့တဲ့သူဟာ ကိုယ့်ဘဝအတွက်တော့ ရောင့်ရဲ တင်းတိမ်နိုင်တာချည်းပါပဲ.. ဦးဆောင် လမ်းညွှန်ဖို့ စိတ်ထက်သန်တဲ့ သူဟာ အဆုံးမတော့ ရှေ့တိုးရင်း ချောက်ထဲကျ.. ဘဝဟာ နောက်ကျောကို ထိုးတဲ့ ဓားတွေကို ဖယ်ရှားနေရတာနဲ့တင် တသက်တာ ကုန်ဆုံးစေခဲ့..
အို ရွှေရောင်တောင်ဆိတ်ကြီးရေ.. အသင့်မှာ အသက်နဲ့ထပ်တူ လဲထပ်ခဲ့တဲ့အတွက် နောင်တ ဆိုတာမျိုး ရခဲ့ဖူးပါသလား.. အို ကိုယ့်မှာတော့လေ တခါတလေမှာ နောင်မှ ယူကြုံးမရ နောင်တဆိုတာမျိုး ခဏ ခဏ ကြုံရဖူးတဲ့အတွက် နာကျင်ခံစားလိုက်ရတာ…
မိုးမြင့်ပျံ တိမ်ညွန့်စား စွမ်းပကားကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတဲ့.. ကြယ်စင်တွေရဲ့ အလင်းတွေ လူတွေအပေါ် ထင်လင်းစေချင်လွန်းလို့ အချိန်တိုင်းသာ လမိုက်ည ဖြစ်စေချင်တဲ့သူ..ဒီလိုလူမျိုးမှာမှ အချိန်တိုင်းဟာ လပြည့်တယ်..
ရာသီအစ အဲ့ဒီ မိဿ ရာသီခွင်ကိုက ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ကျောပေါ်ပိုးပြီး ဒုက္ခ အဆင်းရဲခံတတ်တဲ့ တောင်ဆိတ် တကောင်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်.. ကိုယ့်မှာ တောင်ဆိတ်နဲ့ တူတာဆိုလို့ ဒုက္ခတွေကို ကျောမှာ ပိုးထားနေတုန်း ပိုးထားရတုန်းသာ ရှိနေခဲ့..
မလိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေ လျှော့ပြီး စေတနာပိုလွန်းအားကြီးတာတွေကို လျှော့လိုက်ပါတဲ့လေ.. ရွှေရောင်တောင်ဆိတ်တကောင်နဲ့ လူ့ပြည်က ဒုက္ခတွေကို ကျောပိုးထားတဲ့ မိန်းမငယ် တယောက်ကြားမှာ နက္ခတ်တူ ရာသီခွင် တူရုံကလွဲလို့ ဘာတွေများ ထူးခြားတာမျိုးတွေ ရှိနိုင်မလဲ..
စဉ်းစားချင်ပါရဲ့.. တွေးတောဖို့ ဦးနှောက်အစုံက အခုတော့ ပင်ပန်းလွန်းလို့ ရူးသွပ်ခဲ့ပြီ.. တော်ပါပြီလေ.. ကိုယ့်စိတ်ကို နာကျင်အောင် ဆုံးမလဲ.. အမှတ်မရှိတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်အားကိုး ရှေ့ကိုသာ ဆက်တိုးနေတော့တာ..
ကောင်းကင်က အလင်းလက်ဆုံး ကြယ်တွေကို စိတ်ကူးနဲ့ ပုံဖော်ထားတဲ့ တောင်ဆိတ်တကောင်ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်နေတဲ့ မိဿရာသီခွင်ရဲ့ အရုပ်.. အင်္ဂါဂြိုလ်စိုးမိုးပြီး တနင်္ဂနွေဂြိုလ် နေမင်းရဲ့ အားကောင်းတဲ့ အစွမ်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူ.. ရန်အပြိုင်အဆိုင်တွေကို ရင်ဆိုင် ချေမှုန်း ဖယ်ရှားဖို့ ကြိုးပမ်းနေရတဲ့သူ.. ဘဝတိုက်ပွဲကို အမြဲတစေ ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်နေရတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့..
တကယ်တော့ ကိုယ်ဟာ အေးအေးဆေးဆေး နေချင်ပါတယ်.. ထိတွေ့နေရတဲ့ အဝန်းအဝိုင်းကို သိမ်းသွင်းနိုင်သတဲ့.. ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လား.. ကိုယ် ဆိုတဲ့သူကလဲ ဗေထိ ဆိုတာနဲ့ အနည်းလေးတော့ နဖူးမှာ တချက် ကျောမှာ တချက် မြှားချက်က ထိမှန်ခဲ့စမြဲ ..
အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာတာနဲ့ အမျှ စိတ်တွေကလဲ မဖြူစင်နိုင်တော့.. အရင်လို ဖြူဖြူစင်စင် ကူညီမှုတွေ မပေးနိုင်တော့တဲ့အပြင် အခါ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြောနေရတဲ့ စကားလုံးတွေကြားမှာ စိတ်မရှည်တတ်တော့.. လူတွေကို ကုန်းပိုးပြီးသာ လိုရာ သယ်ဆောင်ပေးလိုက်ချင်သည်.. သူတို့ရဲ့ ပြဿနာတွေကြား နာမခံချင်တော့..
လူတွေဟာ အယင်ကထက် ပိုပြီး ဒုံးဝေးလာတယ်လို့ ထင်နေရင်းနဲ့ကို တကယ်တော့ ပိုဝေးသွား တဲ့သူဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာ ဖြစ်နေခဲ့တော့တာ.. စကားတခွန်းကို ၂ ခါ ထပ်ပြောရင် ဒေါသတကြီး ဖြစ်လာတတ်တဲ့ ကိုယ်ဟာ တကယ်တော့ ပထမ တခွန်းမှာတင် စိတ်က တိုနှင့်ခဲ့ပြီ..
ကိုယ်က ရာနှုန်းပြည့် လူကောင်း မဟုတ်ပါဘူး.. လူဆိုးလဲ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကွယ်.. ဒါပေမဲ့ အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်စကားလုံးတွေဟာ သူတပါးရဲ့ အပြုံးတွေ အဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားစေချင်ပါတယ်.. ကိုယ်ဟာ အရောင်ထည် ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် အဖြူရောင် မဖြစ်ချင်ခဲ့... လူတွေရဲ့ အပူတွေကို စုပ်ယူပေးနိုင်တဲ့ အနက်ရောင် ပုဝါထည် တစသာ ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်..
ရွှေရောင်တောင်ဆိတ်ရဲ့ အလင်းတန်းနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့ပြီး မွေးဖွားခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ သူဟာ ကူညီချင်တဲ့ ကြင်နာတတ် တဲ့ စိတ်တွေ ခေါင်းပါးလာပြီလို့ တွေးမိတဲ့အခါ တိတ်တဆိတ်သာ ဝမ်းနည်းလာလေတော့သည်.. နေနှင့်ပါဦးကွယ်.. အပြာရောင်ကြည်စင်တဲ့ ကောင်းကင်ပြင်သာ တိမ်ကင်းစင်တဲ့ တနေ့ ရောက်ခဲ့ရင် ကိုယ်လေ အယင်လို ပြန်ဖြစ်စေရပါ့မယ်လို့.. ဘယ်သူမှ မသိလဲ ဘေးမှာ မရှိနိုင်တော့တဲ့သူကို တိုင်တည် ဆုတောင်းခဲ့ဖူးပါရဲ့..
ရာသီစက်ဝန်းဟာ အခုတော့ တပတ် ပြန်လည်ခဲ့ပြီ.. အသစ် စတင်ဖြစ်ထွန်းတဲ့ နှစ်အသစ် အစမှာ အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းတွေနဲ့ ပြန်လည် သက်ဝင် လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြန်လာနိုင်ဦးမယ်တဲ့.. အယင်လိုသာ ပြန်ရမယ်ဆို ဖြူစင်တဲ့ ဟိုအယင်လို ဘဝမျိုးသာ ပြန်ရချင်တော့တာ..
ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့.. ကျရှုံးခဲ့ပြီလို့ ထင်ရတဲ့.. ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ဖူးတဲ့.. ဖြူစင်တဲ့ စိတ်နှလုံးနဲ့ အယင်လို အပြုံးမျိုးကို ပြန်ရချင်မိတဲ့ မိန်းခလေးဟာ.. လောကအလယ်မှာ ယက်ကန်ယက်ကန် ကူးခတ်နေရတုန်းပါပဲ.. ၂၀၁၂ ရယ် ဘဝမှာ အပျော်ဆုံးနှစ်သစ် တစ်နှစ်တော့ ဖြစ်ပါရစေဦး.. လုံးလုံးတော့ စိတ်က မပြောင်းသွားနိုင်ပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့… အရာရာ အကောင်းဘက်ကို ပြောင်းလဲသွားစေချင်ပါတယ်..
(၁-၆-၂၀၁၁၊ ၁း၅၆ pm)
at 10:13 PM Labels: စိတ်ကူးတည့်ရာ